Olee otú Naghachi Lost iPhone kalenda
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ kalenda on iPhone (iPhone 6s gụnyere)
The Best iPhone Kalinda Iweghachite Software: Wondershare Dr.Fone maka iOS
Mkpa data ọnwụ si iPhone (gụnyere iPhone 6s na iPhone 6s Plus) bụ ihe egwu ihe, ọ bụ ezie na e nwere numerable ihe nwere ike ime ka ya. Ọfọn, gị echegbu onwe n'ihi data ọnwụ nwere ike ejedebe ebe a ugbu a. N'agbanyeghị na ị furu efu ya ruru ka mberede nhichapụ ma ọ bụ ngwaọrụ agbajikwa, e nwere ụzọ atọ n'ihi na ị na-arụ ọrụ ya: ike iṅomi ya na gị na iPhone (iOS 9 gụnyere), wepụ ya si gị iTunes nkwado ndabere na mpaghara naputa site na gị iCloud ndabere.
Eme na otú a, ị mkpa ịdabere na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac). Ma omume-ekwe ka ị na-agbake ehichapụ iPhone kalenda na naanị 3 nzọụkwụ: iṅomi, ifiọk na-agbake. Ugbu a, download ikpe version n'okpuru maka free inwe a na-agbalị mbụ.
Ntak emi Họrọ Wondershare Dr.Fone maka iOS
3 Ụzọ maka Data Recovery
Selectively ịchọgharị ma weghachite data si iOS ngwaọrụ, iCloud na iTunes backups (gụnyere ezoro ezo ndị).
Naghachi ruo 18 File iche
Naghachi kọntaktị, SMS, foto, videos, dee, oku na-aga log, kalenda, ozi olu ozi olu, olu memo, ngwa data, wdg
Fọrọ nke nta niile iOS Devices
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọhụrụ iOS 9 ma na-akwado iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads na iPod aka 5.
Nchekwa na mfe iji
N'ihe ize ndụ free mmadụ niile nwere ike ijikwa ya nanị dị ka 1-2-3, ọ dịghị oru nkà chọrọ mgbe niile.
Olee otú Jiri Wondershare Dr.Fone maka iOS naghachi ehichapụ kalenda si iPhone
Part 1: Naghachi ehichapụ kalenda Kpọmkwem si gị iPhone (mgbe ị na-adịghị ihe ọ bụla ndabere)
Part 2: Wepụ iTunes ndabere naghachi iPhone kalenda (mgbe ị na-iTunes ndabere)
Part 3: Naghachi iPhone kalenda si iCloud ndabere (mgbe ị nwere ihe iCloud ndabere)
Part 1: Naghachi ehichapụ kalenda Kpọmkwem si gị iPhone (iOS 9 akwado)
Kpọmkwem weghachite ehichapụ kalenda si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS.
Nzọụkwụ 1. Run usoro ihe omume na jikọọ na gị iPhone na kọmputa. Adịghị na-agba ọsọ iTunes mgbe ị na-eme nke a.
Nzọụkwụ 2. Pịa na Malite iṅomi button na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone mgbe ọ na-ahụrụ site usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 3. Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu hụrụ data na-agbake ha na otu Pịa.
Nkebi nke 2: Wepụ iTunes ndabere naghachi iPhone kalenda
Naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka iTunes ndabere maka niile iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File n'elu mgbe na-agba ọsọ software.
Nzọụkwụ 2. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị iPhone na pịa na Malite iṅomi bọtịnụ wepụ ya.
Nzọụkwụ 3. Preview ọdịnaya niile dị na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na nne Mmetụta ihe ọ bụla ihe ị chọrọ. Mgbe ahụ, pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Nkebi nke 3: Naghachi iPhone kalenda si iCloud ndabere
Access iCloud ndabere ka ịhụchalụ na selectively naghachi ọ bụla data ị chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere File mgbe launching usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2. nbanye gị Apple ID, họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị iPhone ibudata ma wepụ ya.
Nzọụkwụ 3. All data na nkwado ndabere na mpaghara nwere ike previewed mgbe mmịpụta. Họrọ ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị.
Atụmatụ: Mgbe Kalinda icon na-efu na iPhone n'ụlọ ihuenyo
General ekwu okwu, Kalinda bụ a Mee na-ngwa na iPhone, nke a gaghị efu site na ya onwe. Ọ bụrụ na a na-eme, i kwesịrị ego gị iPhone ọma, n'ihi ya na ị na-adịghị mkpa na-eme amara na ntọala gị na iPhone. Gịnị ka ị pụrụ ime maka efu nke Kalinda? Agụ ndepụta n'okpuru.
1. Tulee nchekwa na gị iPhone: Nke a ga-akpa. Ọ bụ nnọọ mfe ịdọrọ ihe ngosi n'ime a nchekwa na ị mepụtara idozi multiple oyiyi na gị iPhone. Mgbe ọ na-eme site na onye na elezighị edinam, ọ bụ nnọọ mfe ileghara ya. Ya mere ego ya nke ọma na-eme ka n'aka na Kalinda icon na-n'ezie na-efu.
2. Malitegharịa ekwentị gị iPhone: Site nza nke ahụmahụ nke iPhone ọrụ, ibidogharịa pụrụ n'ezie ịgwọta ole na ole obere chinchi nke iPhone. Ọ ga-afụ ụfụ ngwaọrụ gị ihe ọ bụla. Dị nnọọ enye ya a na-agbalị tupu ị na-achọ ndị ọzọ ngwọta.
3. Tọgharia iPhone n'ụlọ ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu: Ọ bụrụ na ị gosikwara na Kalinda icon na-n'ezie arahụ Site na Ihuenyo gị iPhone, i nwere ike ịgbalị otú a. Resetting iPhone n'ụlọ ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu nwere ike na-eme ka Ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndabere ntọala, ọ bụghị agbanwe agbanwe gị data. N'ihi ya, na-eme ya na-enweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe, na mgbe ahụ ị ga-ahụ na akara ngosi na igosi na gị iPhone ọzọ.
Gaa: Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa Home ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu.